Par Taratra sur 18/01/2022 NS Malagasy, NS-Sports
Mikasa ny hitsidika ireo klioba misy eto Analamanga ny Sensei Tomokazu, ho fanatanterahany ny asany sy ho fampiroboroboana ny taranja Judo. Teknisiana japoney nilatsaka an-tsitrapo, hiara-hiasa amin’ny federasiona malagasy, mandritra ny roa taona, ny Sensei Tomokazu Iwahori. Manana ny tepana mainty, 3e Dan Kodokan, izy ary hizara ny traikefany amin’ireo teknisiana sy ny mpikatroka eto […]
Lalao efatra ka roa avy ho an’ny vondrona “B” sy “C” no voalahatra, anio talata, eo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona ho an’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika, taranja baolina kitra (Can 2022), tanterahina any Kameronina. Anisan’ny fihaonana andrasan’ny rehetra ny fifandonana eo amin’i Malawi sy i Sénégal. Hiendrika famaranana kely mantsy ny lalaon’izy ireo. Manana isa 4 […]
Mahatratra mahatratra 200 ireo mpilalao rugby eny ambany tanàna amin’izao fotoana. Mivondrona anatin’ ny FTMR (Fikambanan’ny Tanora Mpanao Rugby ao anatin’ny boriborintany 6), maro amin’izy ireo no milalao amin’ny diviziona misy samihafa. Tanteraka tetsy amin’ny ANS Ampefiloha, ny faran’ny herinandro teo kosa, ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao nokarakarain’ny FTMR. Nambaran’ ny filohany Rakotondrafara Jean […]
Badminton – «Mada double 2022»: nanao pao-droa i Marc mpilalaon’ny Baobad
Ny fifaninanam-pirenena ho an’olon-droa, taranja badminton no nanokafan’ny federasiona malagasy (FMB), ny taona 2022. Mbola nisongadina ny fahaiza-manaon’i Marc, izay nanao pao-droa Notanterahina ny asabotsy 15 sy ny alahady 16 janoary lasa teo, teny amin’ny kianja mitafo ANS Ampefiloha, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Ma­dagasikara, taranja badminton. Ny fihaonana ho an’olon-droa, no natrehina. Niavaka ny […]
Ny faran’ny herinandro izao : ahina ny fiforonana rivodoza ao amin’ny ranomasina Indianina
Par Taratra sur 18/01/2022 Divers, NS Malagasy
Ahina ny fiforonana rivodoza ao amin’ny ranomasina In­dianina, ny faran’ny herinandro izao na ny fiandohan’ny herinandro ho avy, araka ny tomban’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro eny Ampandrianom­by, ny teknisianina, i Lahatra Mam­piono­na, omaly. Ao anatin’ny atifahavatra tanteraka amin’izao fotoana izao, izay fotoana fiforonan’ny rivodoza ka mila miomana sahady ny rehetra. Ampitaina miandalana ny fi­voaran’izany fiforonana […]
Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka : “Mihena ny isan’ny marary eny amin’ny CTC-19”
« Mihena ny mararin’ny Covid-19 eny anivon’ny CTC-19 », hoy ny minisitry ny Fa­hasalamam-bahoaka, profesora Randriamanantany Zely Arive­lo, omaly, teny Ambohidahy noho fahombiazan’ny fiaraha-mientana sy fiaraha-miasa eo anivon’ny minisitera manerana ny Nosy. Nambarany koa fa tratra ny tanjona 1 000 000 ny olona vita vaksiny fanefitra Covid-19 hatramin’ny fiafa­ran’ny taona lasa teo. Naneho fi­saorana ho an’ireo mpiasan’ny […]
fidirana mianatra: maro ireo sekoly tsy nahavita nanaja ny fepetra ara-pahasalamana
Par Taratra sur 18/01/2022 Faits Divers, NS Malagasy
Nandritra ny fidiran’ny mpianatra, omaly, tsikaritra fa nisy ireo sekoly tsy nahavita nampanaja ny fepetra ara-pahasalamana akory, araka ny noantitranterin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Toy ny andavanandro ihany ny fitangoronana teo am-bavahady tamin’ny ora fidirana sy firavana, omaly, raha ny tazana tamin’ny ankamaroan’ny sekoly. Torak’izany ny tao an-tokotanin-tsekoly sy tao an-dakilasy. Mifanetinety ny mpianatra fa tsy nisy […]
Orinasan-tserasera: hiampy 038 ny laharana amin’ny Telma
Par Taratra sur 18/01/2022 Economie, NS Malagasy
Ho tratra tsy ho ela ny fetr’isa 10.000.000 amin’ny laharana 034 hamantarana ny finday Telma. Nam­baran’ny Administratera tale jeneraly, Patrick Pisal Hamida, fa laharana vaovao ny 038. Miomana mialoha izahay satria efa akaiky ho tapitra ny 034, izay efa maherin’ny 9 tapitrisa izao. Koa, tsy ho ela dia ho tratra ny 10 tapitrisa, araka ny […]
Fidangan’ny vidim-piainana: nisondrotra 66% litatry ny menaka
Raha jerena amin’ireo entana vokarina eto an-toerana, tsy nisy latsaky ny 8% ny fisondrotam-bidy,nandritra ny taona 2021. Tafakatra 200 % kosa ny saram-pitaterana entin’ny sambo. Nahatratra 6% ny fidangan’ny vidim-piainana ny taona 2021, araka ny tarehimarika navoakan’ny Instat. Tsy ara­ka izany anefa ny tena zava-misy raha raisina amin’ireo zavatra tena ilaina andavanandro (PPN) hita eny […]
Par Taratra sur 18/01/2022 En Bref, NS Malagasy
Hisy ny fihaonambe ara-toekarena faha-6 eo amin’ny Vondrona afrikanina (UA) sy ny Vondrona eoropeanina (UE) amin’ny 16 sy 17 febroary 2022 any Paris. Ao anatin’ ny tontolo feno valanaretina, hamorain’ny UE ny fifandraisana amin’i Afrika. Ny fandrahonana matetika any amin’ny tany arabo sy fipariahan’ny Covid-19 izay misy fiantraikany betsaka eo amin’ny lafiny sosialy sy toekarena […]
Fandoavan-ketra: Ezahina ny hampiditra ny rehetra anatin’ny ara-dalàna
Par Taratra sur 18/01/2022 Economie, NS Français
Ampitomboina 1 750 000 ny mpandoa hetra ao amin’ny fanjakana amin’ity taona ity, raha toa 751 000 ihany ireo, ny faran’ny taona 2021 teo. “Ezahina ny hampiditra ireo mpitady vola anatin’ny rafitra ara-dalàna, satria vitsy kely ireo raha mitaha amin’ny isan’ ny Malagasy izay mananika ny 26 tapitrisa. Ny olona mitady vola anefa misy 10 tapitrisa”, […]
Faritra Atsimo Atsinanana: betsaka ireo karazam-bokatra mora vidy
Vokatra any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana, mahakasika ny fambolena, fiompiana, sy asa tanana. Betsaka ny miantsehatra amin’ireo, saingy ny olana eo amin’ny famoaham-bokatra sy ny tsy fandriampahalemana. Matiantoka ireo tantsaha any an-toerana. Malaza amina fambolena sy fiompiana ny faritra Atsimo Atsinanana, fihariana tokony hampandroso manokana ny faritra sy ny firenena amin’ny ankapobeny. Singa­ni­na amin’izany ny […]
…Ka ilay izy aza kisarintsariny fa tsy tena izy ka lazaina indray fa mangotraka! Eny, satria tena miady manovokovoka tokoa ny sasany, saingy tsy tsapany fa diso fahavalo izy hany ka rera-maina. Tsy misy vokatra tsara azo. Tsy mandroso fa mety hihemotra aza kanefa ny hatsembohana efa manenika ny vatana iray manontolo. Saika tratran’io tranga […]
Tontolo iainana sy kolontsaina: hazo zanatany no tokony hambolena
Par Taratra sur 18/01/2022 NS Malagasy, NS-Culture
Sokafana anio ny fotoam-pambolen-kazo manerana an’i Madagasikara. Efa voasokajy ao anatin’ny “asa masina” ho an’ny tanindrazana izy ity. Azo atao tsara anefa ny mikendry voka-tsoa roa avy hatrany amin’ny vanim-potoana tahaka izao. Tsara ny mamboly hazo mora maniry fa mitondra tombony lehibe ihany koa ny mamboly hazo zanatany. Maro amin’ny hazo zanatany rahateo no madiva […]
Fihaonan’ny mpanao zavakanto: tonga marobe ireo mpisehatra amin’ny literatiora
Na eo aza ny valanaretina, mitohy hatrany ny hetsika karakarain’ireo mpisehatra ara-javakanto. Nifamotoana tetsy Tsimbazaza ireo mpanoratra, poeta, mpikabary, ny alahady teo, nifampizara traikefa… Fahombiazana ny hetsika fifampiarahabana nahatratra ny taona sy ny famondronana ireo talenta maro loko, afakomaly, alahady, tetsy Tsimbazaza. Saika nahitana ireo mpanan-talenta avy amina sokajy samihafa ary nahitana solontena avy amin’ny […]
Fampandrosoana eny ifotony : hanohana ny tantsaha ny faritra Analamanga
Par Taratra sur 18/01/2022 NS Malagasy, NS-Politique
Hiompana bebe kokoa amin’ny fanohanana ny tan­tsaha, amin’ny fambolena sy ny fiompiana, ankoatra ny asa fampandrosoana efa fanaony ny eo anivon’ny faritra Analamanga amin’ity taona ity. Nambaran’ny governora, Rasoamaromaka Hery, omaly tetsy Ambohidahy fa miainga avy amin’ny hetaheta eny ifotony ny fampandrosoana. ”Hanampy ny tantsaha eo fampitaovana sy ny lafiny teknika ny isika. Fomba fiasa […]
Misaona ny tontolo politika: nodimandry ny Jly Raveloharison Herilanto
Misaona ny tontolo poli­tika sy ny zandary. Nodi­mandry omaly teo amin’ny faha-64 taoany ny zandary manamboninahitra ambony, ny jeneraly Raveloharison Herilanto. Teraka tamin’ny 9 avrily 1958 tany Antsiranana izy. Manana ny maripahaizana amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana tany amin’ny ”Université Panthéon-Sorbonne» sy ny ”Institut international d’administration publique, Paris”, Fran­tsa. Efa nitana andraikitra ambony tamina minisitera maromaro ny taona […]
Fitondrana ny hetahetam-bahoaka: nampiaka-peo amin’ny vidim-piainana Razanamahasoa Christine
Nitondra ny feon’ny eny ifotony. Nitondra ny heviny manoloana ny fiainana andavanandron’ny mponina ny filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine. Nohitsiny fa tena efa tafahoatra ny zava-misy. “Tena akaiky vahoaka izahay ary ma­heno azy ireo eny an-kianja koa. Marina fa anaty fitondrana aho nefa kosa mahatsapa fa tsy mitsahatra misondrotra ny vidin’ny kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro […]
Fitaterana Teleferika: Nakisaka ny “pylone” eny amin’ny tanin’ny katolika
Nandray fanapahan-kevitra ny fanjakana manoloana ny tetikasa fitaterana an-tariby Te­leferika. « Tsy hametrahana andry lehibe na “pylône ao anatin’ny faritry Katedraly eny Andohalo sy ny faritry Kolejy St Michel Amparibe », hoy ny sekreteram-panjakana misahana ny Tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana (SENVH), Andriamanohisoa Gérard, ny herinandro teo. Nanteriny fa mihaino ary misokatra amin’ny fifampiresahana ny […]
Fanatsinkafonana ny fanondranana harem-pirenena: Malagasy sy arabo ireo anisan’ny atidohan’ilay volamena 49 kg
Manomboka mipoitra tsikelikely. Nampahafantarin’ny minisitry ny Fitsarana, Imbiki Herilaza, omaly, teny Fara­vohitra ny tohin’ilay raharaha volamena, 49 kg sarona tatsy Kaomoro. “Ahitana teratany malagasy sy arabo ireo voasaringotra amin’io raharaha io ary anisan’ny atidoha nikotrika izany. Efa fantapantatra ny firenena misy azy ireo”, hoy izy. Nanteriny anefa fa tsy eto Madagasikara na any Kao­moro ireto […]
Olana mila vahana ifotony
Par Taratra sur 18/01/2022 Edito Taratra, NS Malagasy
Tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana… Izany no olana ifotony mahazo sy iaretan’ny vahoaka amin’izao. Fantatra sy eken’ny fitondrana foibe? Na eo aza ny ezaka amin’ny fampanjakana filaminana, miandry sy manantena vahaolana mahomby sy maharitra rehetra. Misy ihany ny tany lavitra fanjakana? Na tsy mahavaha olana ny solontenam-panjakana… Indraindray, izy ireny aza no manahirana ny vahoaka ifotony […]
Par Taratra sur 18/01/2022 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Efa voasambotra ilay vazaha, namono nahafaty tamin’ny alalan’ny tsindrona antsy an-dRamananarivo Junnot, sekretera jeneralin’ny Union Emmergence Madagascar (UEM), tetsy Ivandry, afakomaly alina. Efa manao ny fanadihadiana ny polisin’ny Brigade criminelle (BC). Niditra an-tsehatra mihitsy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta nanome toromarika ny minisitry ny Fitsarana sy ny tonia mpampanoa lalàna ary ireo mpanao famotorana, momba ity […]
Ambohimiandra: olona efatra naratra nodarohan’ny mpitandro filaminana
Tabataba, daroka ireo no re tao amina « karaoké » iray etsy Ambohimiandra, afakomaly tokony ho tamin’ny 02 ora maraina. Voalaza fa nanakorontana sy nidaroka olona ireo mpitandro filaminana ni­sotrosotro tao an-toerana. Voa­laza fa miaramila misotro ro­nono iray sy polisy efa-dahy ireo nitarika ny korontana. Araka ny fanazavana voaray, efa mpandeha ao amin’io karaoké io ity miaramila […]
Belalitra – Ambato Boeny: mpiasana valan-javaboahary tratra nangalatra hazo voamboana
Saron’ny polisim-pirenena miasa ao amin’ny kaomisaria (CSP) Ambato-Boeny ireo olona malaza ratsy amin’ny fitrandrahana hazo sarobidy, omaly. Raha ny tatitra voaray avy amin’ny talem-paritry ny Filaminam-bahoaka, nahazo loharanom-baovao izy ireo momba ny fisiana olona mi­trandraka sy mivarotra hazo sarobidy toy ny voamboana (palissandre) ao amin’ny fari-piadidian’izy ireo. Fantatra fa tafiditra ao anatin’ny toerana arovana Ankarafantsika/ […]
Ampasy-Nosy Be: nitera-doza ny dinamita napoakan’ny Sinoa
Maherin’ny folo ireo trano rava, maro sy fananana simba, tsy vitsy ihany koa ireo biby fiompy maty. Ireo ny vokatra nateran’ny fipoahan’ny dinamita nataona orinasa sinoa mpanamboatra lalana tao amin’ny toeram-pamakiam-bato ao Fascene-Ampasy-Nosy Be. “Efa nahatratra 500m ary ta­fakatra 30m ny ahavon’ny fi­paritahan’ny fotaka sy vato ka nahatonga fahapotehan’ny fananan’ireo mponina ao an-toerana”, hoy ny […]